यसरी खुल्यो यस्तो तथ्य ४ लाख ८० हजार नागरिक नागरिकता बिहीन ! « Janaboli
यसरी खुल्यो यस्तो तथ्य ४ लाख ८० हजार नागरिक नागरिकता बिहीन !
बैकंक । गत महिना,थाइल्याण्डको चियांग राय प्रांतको थाम लुङ्ग गुफाबाट १२ जना बालबालिकामध्य तीन जना र उनीहरुका २५ वर्षिय प्रशिक्षक लाई बुधबार थाईल्याण्डको सरकारले नागरिकता दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी (युएनएचसीआरसी) ले थाई सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । यस घटनाले संसारभर निकैं ठुलो चर्चा पाएको थिँयो गुफामा फसेका १२ जना बालबालीका र एकजना प्रशिक्षकलाई गत महिना झण्डै दुई हप्ता पछि उद्धार गरिएको थिँयो ।
यस घटना सँगै यूएनएचसीआर ले थाइल्याण्ड मा अहिले पनि ४ लाख ८० हजार मान्छे नागरिकता बिना थाइल्याण्डमा बसिरहेको जनाएको छ । थाइल्याण्डमा जन्मेको भए पनि केही मानिसहरूले सही अवसर र नागरिकता पाउँदैनन्। यी तीन बालबालीका र उनीहरूका प्रशिक्षकसँग पनि थाई नागरिकता नहुनु यसैको पराकाष्ठ भएको उसले बताएको छ ।
सपना देखाउने मौका छ
युएनएचआरसीका विशेष सल्लाहकार कैरल ब्याचलरले थाई सरकारले उनीहरूलाई बुधबार नागरिकता दिएर जीवनमा राम्रो तथा स्वर्णीम सपना देख्ने अवसर दिएको आषय व्यक्त गरेका छन । यस घटना पछि, पहिलोपल्ट १२ बच्चाहरु साथमा यो हप्ता पहिलो पटक स्कूल गए। फुटबल प्रशिक्षक एकापोल चानाथ्वाङ्गले भनेः उनले थाई सरकारबाट एक परिचयपत्र पाएका छन उनी जीवनमा सबैभन्दा खुःशी छन । उनले बच्चाहरूसँग नागरिकता छ भने फुटबल खेल्न चाहँदैनन् भने पनि अब उनीहरूले सरकारी जागिरका लागि परीक्षा दिन सक्ने बताएका छन